လစာညှိနှိုင်းဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello ထံမှဂျော့ဘ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပိုပိုက်ဆံတောင်းရန်ခက်ခဲသည်. မေးရန်လက်ျာအချိန်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်သိကျွမ်းရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်မစတင်ရသောအခါလစာညှိနှိုင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. တစ်ဦးလစာတိုးတောင်းဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာမည်.
သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်မစတင်မီ, သင်နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်သင်အခပေးပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်သဘောတူမည်သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့အကြိုးခံစားခှငျ့. အခြို့သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, သင်သည်သင်၏လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသဘောတူညီချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်. သငျသညျလစာနှင့်အကျိုးအမြတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်စတင်နိုင်သည့်အခါသင်ပိုမိုဝင်ငွေစေခြင်းငှါ.
နောက်ပိုင်းတွင်, အခါသင်အလုပ်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကောင်းသောအကျင့်, သင်သည်သင်၏လစာတစ်ခုတိုးညှိနှိုင်းရန်နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးလစာတိုးသမုတ်သော.
သင်တစ်ဦးလစာညှိနှိုင်းကြသောအခါ, သင်ရုံပိုက်ဆံထက်ပိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. သင်ပိုမိုသေးငယ်တဲ့လစာရကျိုးနပ်ပါစေရန်အဘို့အညှိနှိုင်းရန်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်.
အတော်များများကအလုပ်အကိုင်များအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်, ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအာမခံအဖြစ်, အားလပ်ရက်အချိန်, နှင့်အငြိမ်းစားယူမည့်အစီအစဉ်. ချေသောအလုပ် $25,000 တစ်နှစ်သင်မူကားပေးသည် $10,000 အကျိုးခံစားခွင့်ပိုမိုပေးဆောင်စေတဲ့အလုပ်ထက် သာ. ကောင်း၏ $30,00 အဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အတူတစ်နှစ်.
သင်ပေးဆောင်ရဘယ်လောက်အပြောင်းအလဲများကိုနထေိုငျအဘယ်မှာရှိ. တချို့နေရာတွေမှာအခြားသူများထက်အသက်ရှင်ဖို့အများကြီးပိုစျေးကြီးတယ်. သူတို့အားသောနေရာများအတွက်, အလုပ်ရှင်များကိုအတူတူပင်အလုပ်ပိုပိုက်ဆံပူဇော်ရန်ရှိသည်.
သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံ, ပညာရေး, နှင့်အရည်အချင်းများအားလုံးသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ. အလုပ်ရှင်များကောင်းသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအတွက်ပိုပြီးပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်.
တချို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အယခုနှစ်အဆုံးမှာဆုကြေးငွေပူဇော်. ဤရွေ့ကားပစ်မှတ်-အခြေပြုစေခြင်းငှါ. သငျသညျကောင်းသောအမှုကိုပြုလျှင်ဒီကိုဆိုလိုတယ်, သင်ပိုမိုရရှိမည်. အခြားသူတွေမှာ, သင်အားလပ်ရက်များအတွက်ပိုပြီးပိုက်ဆံရစေခြင်းငှါ, (ခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူး) သို့မဟုတ်အခါသင်အလုပ်စတင်နိုင်.
အလုပ်ရှင်သင်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုစာတစ်စောင်ပေးပို့လိုက်တဲ့အခါ, ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအဘို့ထိုသူတို့ကျေးဇူးတင်နှင့်သင်စဉ်းစားချင်ပါတယ်ဆိုသညျကား. သူတို့သည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုလိုအပ်သည့်အခါမေးကြည့်ပါ. အချို့သောသုတေသနပြုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လစာအလုပ်နှင့်တည်နေရာအဘို့အပျမ်းမျှလစာနှင့်အတူကိုက်ညီလျှင်ထွက်ရှာတွေ့. သင်လိုအပ်ချက်အပေါငျးတို့သခရီးဦးကြိုပြုခြင်းများနှင့်ကြိုတင်အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါက, သင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားလစာတောင်းသင့်ပါတယ်လျှင်စဉ်းစားပါ.
အဆိုပါနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မှီ, အလုပ်ရှင်မခေါ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့. သင်ကပိုဝင်ငွေနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောငွေပမာဏအကြံပြုသင့်ပါတယ်ထင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပြောပြပါ. သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကအကြောင်းပြောဆို. အဘို့အမေးရန်အကောင်းဆုံးက 5% သို့ 10% သငျသညျကိုကမ်းလှမ်းအလုပ်ရှင်ထက်ပို. ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ အကယ်., ဆုကြေးငွေ, သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အချိန်ကိုသင်ဖို့ပိုအရေးကြီးလှသည်, အစားသူတို့အဘို့ညှိနှိုင်းရန်.
အလုပ်ရှင်များကိုဆုံးဖြတ်မယ့်ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်. အများအားဖြင့်, သူတို့တစ်နေရာရာကိုပထမဦးဆုံးပမာဏနှင့်သင်တို့အဘို့အမေးသော်၎င်းတဦးတည်းအကြားတစ်ဦးပုံမှသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုတိုးပွါးစေ. တခါတလေ, သင်သည်မည်သည့်တိုးမရကြလိမ့်မည်. သို့သော်မေးမြန်းခြင်းကိုထိခိုက်စေပါဘူး. ဒါဟာအစသင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချမှုများမှာအလုပ်ရှင်ပြသ.
ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအလုပ်အကိုင်များမှာ, အလုပ်ရှင်များကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့လျော့နည်းများပါတယ်. သူတို့ဟာသူတို့ပေးဆောင်မည်ကိုတစ်နာရီလျှင်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုပမာဏခန့်ထားပြီ. သင်တို့မူကားအပိုအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက, သငျသညျညှိနှိုင်းရေးကြိုးစားနိုင်. အလုပ်အတွက်လုံလောက်သောကောင်းသောအလုပျသမားတပင်မျှမဖြစ်ကြပါလျှင်သင်တို့သည်လည်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်မေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်ဤသုံးနိုငျ လစာညှိနှိုင်းအီးမေးလ်က template ကို.
တစ်ဦးလစာတိုးညှိနှိုင်းတစ်ဦးမှ စတင်. လစာညှိနှိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏. သင်ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိများမှာအဘယ်ကြောင့်ပြသချင်. ဒါကြောင့်တစ်ဖန်:
တစ်ဦးလစာတိုးတောင်းဖို့, သငျသညျမြားကိုလညျးသငျသညျအလုပျမှာပြုကြပြီအရာတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပွုပါပွီဆိုပါက, သင့်ရဲ့သူဌေးကထောက်ပြ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကုမ္ပဏီပိုက်ဆံတွေအများကြီးရာ၌ခန့်ထားပြီ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ကကူညီပေးခဲ့. အဲဒီအကြောင်းပြောဆိုရန်မစိုးရိမ်. ကုမ္ပဏီများကောင်းသောန်ထမ်းသိမ်းထားချင်, သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းပိုပြီးပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လျှင်ပင်. ဒီနေရာတွင်တစ်ခုလစာတိုးတောင်းကြသောအခါမှတ်မိဖို့အခြို့သောအခြားအရာများမှာ:
ဥပမာ, သင်တို့အပေါ်မှာယူကြပြီအပိုတာဝန်တွေထောက်ပြ, ဘယ်လောက်မြင့်မားတဲ့သင့်ကားငွေပေးချေမှုများမှာမဟုတ်.
ကုမ္ပဏီပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ပေးဆောင်ဖို့အများကြီးဥပဒေကြမ်းများရှိပါတယ်အခါတစ်ဦးလစာတိုးတောင်းမနေပါနဲ့. အခါကုမ္ပဏီမေးပါ (သို့မဟုတ်သင်) အောင်မြင်သောပါပြီ.
တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်းအတွက်မေးပါ. သင်လိုချင်တာတွေမရကြဘူးလျှင်သင်ချန်ထားမည်ဟုပြောမနေပါနဲ့ - သင်ကဆိုလိုမဟုတ်လျှင်! စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမည်.